माछी मार्न जाऊँ न दाजै कालापानीमा किन विवाद आयो ? यसो भन्छन् जे पापी (भिडियोसहित) - Arthasansar
माछी मार्न जाऊँ न दाजै कालापानीमा किन विवाद आयो ? यसो भन्छन् जे पापी (भिडियोसहित)
आइतबार, २३ कार्तिक २०७७, १४ : ४७ मा प्रकाशित
अर्थ संसार, काठमाडौं - राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएका गीतहरुले जो कोहीको मनलाई स्पर्श गर्न सक्छ । राष्ट्रिय भावनाले भरिपूर्ण गीतहरु सुन्दा हामीमा छुट्टै उर्जा पैदा हुन्छ । कारण हो, हामी सबै आफ्नो राष्ट्रलाई अति प्रेम गर्छौं ।
"माछी मार्न जाऊँ न दाजै कालापानीमा" यो गीत हामी सबैले सुनेका छौं । गीतका रचनाकार विजय श्रेष्ठ हुन् भने यो गीतमा जे पापी, विधान श्रेष्ठ र रिता उपाध्यायले आवाज भरेका छन् । कालापानी विवादलाई समेटेर बनाइएको यो गीत अहिले पनि सिमा विवादको बेला सामाजिक संजालभरी सेयर हुन्छन् । २०५६ सालमा रेकर्ड भएको उक्त गीत एक ताका प्रतिबन्धत समेत भएको थियो । सरकारबाट प्रतिबन्धित गीतमा विवाद समेत आएको थियो ।
सो विषयबारे जान्न आज हामीले उक्त गीतका गायक जे पापी अर्थात् झण्डा शेखर दाहालसँग कुराकानी गरेका छौं । सो गीतमा विधानको नाम छुटेपछि रचनाकार समेत रहेका उनका विजय श्रेष्ठ रिसाएका थिए । यद्यपि विधानको नाम कसले हटायो भन्नेबारे भने जे पापी अझै अन्जान नै छन् । त्यो बीचमा रचनाकार विजय श्रेष्ठ आफूसँग रिसाएको उनी बताउँछन् ।
समसामयीक र राष्ट्रप्रेमले भरेको चेतनामूलक गीतमा मात्र आवाज भने जे पापीका माछी मार्न जाउँ न दाजै कालापानीमा, बाह्र बजे तोप चल्थ्यो एउटा इतिहास बोल्थ्यो, सुत सुत निधा काठमांडु शहर, यो देशको काट्टो खानेहरुले लगायत गीतहरु चर्चामा छन् ।
जे पापीसँग गरिएको कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहोस्:-